तेह्रथुम जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई चाहिने औषधिको पनि अभाव भएको छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि पठाउन छाडेकाले औषधि अभाव भएको हो । स्थानीय तह आफैँले औषधि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै कार्यालयले औषधि पठाएको छैन । कार्यालयले औषधि पठाउन छाडेपछि दुई महिना यता दैनिक अत्यावश्यक औषधि अभाव भएको चुहानडाँडा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सुशील इङ्नामले बताउनुभयो । “दुई महिनायता औषधि सकिएको छ, निःशुल्क पाइने ३९ मध्ये अहिले दुई तीनवटा औषधि मात्रै उपलब्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो । आठराई गाउँपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा ...
बैतडीको तल्लोस्वराडमा औलोरोगको जोखिम रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएकोे छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार साविकका मेलौली, शिवनाथ र महारुद्र गाविस औलो जोखिममा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति सन्तोष पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । खुला सिमाना, तापक्रममा वृद्धि र लामखुट्टेका कारण सो क्षेत्र बढी जोखिममा परेको पाइएको हो । सो क्षेत्रका नागरिकमा गत वर्ष औलो देखिएपछि औलोको जोखिमका विषयमा अध्ययन गरिएको थियो । बैतडी जिल्ला औलो न्यून जोखिम भएको जिल्ला भएपनि मेलौली नगरपालिकाको मेलौली र महारुद्र तथा ...
तनाव झेल्न नसक्ने व्यक्तिमा डिप्रेसन र मानसिक रोगका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा आत्महत्याका घटना बढ्दै गएका छन् । धुलिखेल अस्पतालका चिकित्सक डा अजय रिसालले जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक मुख्य कारणले मानिसलाई आत्महत्यातर्फ डो¥याएको उल्लेख गर्दै आत्महत्याका विभिन्न कारक तत्व हुन्छन् भन्नुभयो । डा रिसालले भन्नुभयो– “जुन विषय बाहिर आएको हुन्छ त्यो नहुन सक्छ, कहीँ न कहीँ मानसिक रोगको प्रभावले नै आत्महत्या निम्ताएको हुन्छ ।” जिल्लामा चालु आव २०७४÷०७५ को साउन १ देखि भदौ १६ गतेसम्म मात्रै २८ जनाले आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । तीमध्ये १४ जनाले झुण्डिएर ...
एचआइभी संक्रमित विरामी बढे
पाल्पा जिल्लामा एचआइभी संक्रमितका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । हिजोआज एचआइभी संक्रमित व्यक्ति विस्तारै खुल्न थालेपछि एचआइभी संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्न थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ३१२ जना एचआइभी संक्रमित फेला परेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ जना एचआइभी संक्रमित थपिएका छन् । आव ०७२÷०७३ मा २९५ जना एचआइभी संक्रमित रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी माधव ज्ञवालीले जनकारी दिनुभयो । गाउँगाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन थालेपछि पछिल्लो समय उनीहरु गाउँ समाजमा खुल्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । भित्रभित्रै समाजको डर र लाजका कारण रोग ...
बिहान–बेलुका खाना खाइसकेपछि फ्लोराइडयुक्त मन्जनले दाँत माझ्ने । बच्चालाई सुतेर खानेकुरा वा दूध खान नदिने । त्यसरी दिँदा खानेकुरा मुखभरि रहन्छ र दाँतमा एसिड उत्पादन तीव्र रूपमा हुन्छ । कोल्डड्रिंक्स खाँदा सकेसम्म पाइप प्रयोग गर्ने । बोतलबाट वा गिलासबाट खाँदा दाँतको बाहिरी भाग अर्थात् इनामेल खियाउने काम गर्न सक्छ । तर, पाइपबाट खाँदा दाँतलाई त्यति असर गर्दैन । बिस्कुट चकलेट तथा अन्य खानेकुरा खाइसकेपछि सकेसम्म मुख कुल्ला गर्ने । हल्का कालो वा पहेँलो दाँत देखिनासाथ उपचारका लागि सम्पर्क गर्ने । सुरुमै जाँच गर्दा दाँतको उपचार सहज हुन्छ ।
डिप्रेसनको शंका छ ?यसरी जाँच्नुस्
जब मानिस डिप्रेसनको सुरुको अवस्थामा हुन्छ, त्यतिवेला व्यक्तिको मुडमा परिवर्तन आउँछ । विशेषगरी दुःखी, रित्तो, रुन मन लाग्ने खालका भावना महसुस भएको पाइन्छ । डिप्रेसनका लक्षणहरूमध्ये कमजोर मुड पनि एक हो । डिप्रेसनको दोस्रो मुख्य लक्षणमा इच्छा, खुसी घट्दै जानु हो । कुनै पनि कुराप्रति चाहना नहुनुका साथै खुसी महसुस हुँदैन । दैनिक क्रियाकलापलगायत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा समेत इच्छा एकाएक घट्छ । जब व्यक्तिमा डिप्रेसन हुन थाल्छ, उसको तौलमा समेत परिवर्तन देख्न सकिन्छ । तौल कि त बढ्ने गर्छ, कि घट्ने गर्छ । अध्ययनअनुसार बच्चामा भने तौल ...
मन्द बिष अजिनोमोटोले यसरी असर गर्छ स्वास्थ्यमा
रेष्टुरेन्टकको मम होस् वा चाउमिनदेखि प्याकेट बन्द चाउचाउ, चिप्स, फास्टफूड, टोमेटो ससहुँदै अजिनोमोटो हाम्रो भान्समा प्रवेश गरिसकेको छ । अजिनोमोटो, जसले खानेकुराको स्वाद बढाउँछ । तर, स्वस्थ्यकर भने होइन । अजिनोमोटोको प्रयोगले शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा बढ्छ । जब अजिनोमोटोयुक्त खानेकुरा सेवन गरिन्छ, रगतमा ग्लूटामेटको स्तर बढ्छ । यहि कारण शरीरमा गंभरि असर पर्छ । यसलाई मन्द विष समेत भनिन्छ । किनभने अजिनोमोटोले क्रमस शरीरका विभिन्न अंगका कार्यक्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लान्छ । खासगरी यसले आँखाको रेटिनामा नोक्सान पुर्‍याउँछ । थाइरायड र क्यान्सर जस्ता रोगलाई समेत निम्त्याउँछ । के हो ...
बिकिनी वाक्सिङ किन र कसरी गर्ने ? यस्तो छ फाइदा
शरीरको अनावश्यक रौं हटाउनका लागि वाक्सिङ सहि विधी हो । बिकिनी एरियाको रौं हटाउन समेत यो राम्रो विकल्प हो । त्यसो त विकिनी वाक्सिङ नयाँ ट्रेन्ड हो, जसमा महिलाहरु रेजरले होइन, शरीरको यो संवेदनसिल हिस्साको रौं हटाउन वाक्सिङ प्रयोग गर्छन् । विगतमा महिलाहरुले अनावश्यक रौं हटाउन त्यसलाई काट्ने गर्थे, जो निकै सहज विधी थियो । तर, विकिनी हिस्सामा रौं काट्दा राम्रो देखिदैन । किनभने यो हिस्सा बच्चाको छाला जस्तै देखिनुपर्छ । वास्तवमा विकिनी एरियामा रहेको रौंलाई वाक्सिङ गर्नुलाई विकिनी वाक्सिङ भनिन्छ । अहिले अधिकांसले वाक्सिङको माध्यामबाट ...
एचआइभी संक्रमण रोक्न बैज्ञानिकहरुको नयाँ खोज
विश्वमा एचआईभी संक्रमितको संख्या तिब्र रुपमा बढ्दो छ । तर एचआईभी सम्बन्धी औषधी छैन । परिणामतः वर्षेनी लाखौ मानिसहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । नयाँ विधी विकास यसकै प्रभावकारी उपचारको खोजमा लागेका अमेरिकाका वैज्ञानिकको समूहले एचआईभीको संक्रमण पत्ता लगाउन नयाँ विधी विकास गरेका छन् । अमेरिकाको नार्थवेस्टर्न विश्वविद्यालयका बैज्ञानिकद्वारा गरिएको उक्त अनुसन्धानले रोग पत्ता लगाउन तथा रोग लाग्न नदिन उपाय विकास गर्न मद्दत पुग्ने आशा लिइएको छ । वैज्ञानिकका अनुसार यस विधी अन्र्तगत प्रत्येक विरियोन्स (संक्रामक कण) को संक्रमणसितको सम्बन्ध बुझ्नका लागि उसको व्यवहारको परीक्षण गरिन्छ । अमेरिकाको नार्थवेस्टर्न ...
'तपार्इं जोडिएको यति राम्रो अभियानमा म पनि जोडिन पाएँ, यसले मलाई धेरै खुसी दिएको छ । क्यान्सरको युद्ध जितेर अरूमा हाँसो थमाइरहनुभएको छ । हाम्रो अभियानमा पनि तपार्इं हुनुहुन्छ । यसले हामीलाई पनि राम्रो काम गर्न हौसला मिल्छ ।' कांग्रेस नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यसरी मन्तव्य सुरु गर्दा नजिकै रहेकी बलिउड नायिका मनीषा कोइरालाको हँसिलो अनुहार झनै खुलेको थियो । मनीषाले आफू बोल्दा खुलेरै गगनको प्रशंसा गरिन् । 'सबैभन्दा पहिले म गगनजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु', मनीषाले सुरुमै भनिन्, 'तपाईं स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा यति राम्रो काम ...
महत्वपूर्ण जडीबुटीको रुपमा रहेको टिमुर लोप हुँदै
महत्वपूर्ण जडीबुटीको रुपमा रहेको टिमुर लोप हुन थालेको छ । संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन नसक्दा वर्षेनी टिमुर लोप हुने थालेको हो । जथाभावी रुपमा हाँगा काटेर फल टिप्दा लोप हुने खतरा बढेको हो । यसको संरक्षणको अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन । आम्दानी मनग्य हुनथालेपछि किसान टिमुरतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । निजी वनमा भन्दा सामुदायिक वनमा टिमुर प्रशस्त पाइन्छ । स्थानीय बजारमा टिमुरको मूल्य प्रति माना रु ३०० देखि रु ४०० पर्छ । टिमुर भदौदेखि कात्तिकसम्म टिपेर बेच्न सकिन्छ । रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–४ का श्रीकृष्ण आत्रेयका ...
अनिद्राको समस्या भएका मानिसले नराम्रा सपना देख्छन् । यस्तो अवस्थामा केही क्षणका लागि श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या आउन सक्छ । नियमित नराम्रा सपना देख्नु मुटुको समस्यासँग पनि गाँसिएको हुन्छ । केही समयअघि अनुसन्धानकर्ताले बाल्यकालमा नियमित नराम्रा सपना देख्ने व्यक्तिमा पछि गएर मानसिक समस्या देखिने बताएका थिए । एक अध्ययनपछि उनीहरूको प्रतिवेदन ‘स्लिप’ नामक जर्नलमा प्रकाशित गरिएको थियो । बारम्बारका नराम्रा सपनाका कारण बालबालिकाले भावनात्मक चोटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार नराम्रा सपनाले मानिसभित्र रहेका शारीरिक समस्याको संकेत गर्छ । मुटुको समस्या आउँदा फोक्सोमा पानी ...
मधुमेह यस्तो रोग हो, जो लागेपछि कहिल्यै निको हुँदैन । तर, यसलाई कम भने गर्न सकिन्छ । कसरी ? हाम्रै जीवनशैलीलाई अलिकति फरक तरिकाले जिउन सके हुन्छ । केही महत्वपूर्ण टिप्स पढ्नुस्, जसले मधुमहेलाई कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ : तपाईंको शरीरले कार्बोहाइडे«डलाई सुगरमा टुक्र्याउँछ । इन्सुलिनले सुगर बढाउँछ । कार्बोहाइड्रेड पर्याप्त खाँदा वा इन्सुलिनको कार्यमा समस्या आएमा यो प्रक्रिया बिग्रन्छ र ब्लडमा ग्लुकोजको तह बढ्छ । न्यून कार्बोहाइड्रेडयुक्त भोजनले ब्लडसुगरको तहलाई घटाउँछ र ब्लडसुगर स्पाइकबाट बचाउँछ । नियमित व्यायामले तौल घटाउन सहयोग गर्नुका साथै इन्सुलिनको तीव्रता वृद्धि ...
नवजात शिशुलाई आमाको दूध यसकारण आवश्यक
नवजात शिशुमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुँदैन । आमाको दूधबाट यो शक्ति प्राप्त हुन्छ । आमाको दूधमा लेक्टोफोर्मिन नामक तत्व हुन्छ, जसले बच्चाको शरीरमा फलाम तत्व दिन्छ । फलाम तत्वले शिशुको शरीरमा कीटाणु प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । आमाको दूधबाट आएका साधारण जीवाणुले बच्चाको शरीरमा उब्जने रोगसँग प्रतिरोध गरेर उनीहरूको रक्षा गर्दछन् । नवजात शिशुुलाई आमाको दूध मात्रै खुवाउनुपर्छ । ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म आमाको दूध र अन्य पौष्टिक खानेकुरा खुवाउन सकिन्छ । आमाको दूध जन्मेदेखि ६ महिनासम्मका शिशुको शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक पर्ने ...
पुरुषले अर्काको मन कसरी जित्ने ?अभिनेता प्रदीप खड्काका सुझाब
अभिनेता प्रदीप खड्का भाग्यमानी कलाकार मानिन्छन् । उनले आफ्नो पहिलो लिड क्यारेक्टर ‘प्रेमगीत’बाटै सबैको मन लुटे । प्रेमगीतको सिक्वेल ‘प्रेमगीत २’ ले थप सफलता हात पार्‍यो । दुवै चलचित्र व्यावसायिक रूपमा सफल मात्रै भएनन्, प्रदीपले प्रशस्त फ्यान पनि कमाए । ह्यान्डसम नायकका रूपमा चलचित्र क्षेत्रमा चिनिएका प्रदीपलाई नयाँ पत्रिकाका रामजी ज्ञवालीले प्रश्न गरेका छन्– पुरुषले अरूको मन कसरी जित्न सक्छन् ? यस्तो छ उनको विचार : सहयोगी भावनाको विकास सबैभन्दा पहिलो कुरा मानिस सहयोगी भावना भएको हुनुपर्दछ । आफूले सक्दो सहयोग गर्न कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । सक्ने ...
तास अत्यन्तै स्वादिलो परिकार हो । यो मिठो परिकार घरमै पनि मज्जाले बनाउन सकिन्छ । यदि तपाईंलाई सामान्य टिप्स भएको खण्डमा घरमै मज्जाले तास बनाउन सक्नुहुन्छ । तपाईंले मटन वा चिकेन दुवैको तास बनाउन सक्नुहुन्छ । सबैभन्दा पहिले मासु तयार पार्नुहोस् । कम्तीमा ३० देखि ३५ ग्रामसम्मको मासुको टुक्रा हुने गरी काट्नुहोस् । तास बनाउँदा सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मसला मिसाउँदा गर्नुपर्छ । कम्तीमा १ केजी मासुको लागि १–१ पाउ लसुन, अदुवाको टुक्रा कुट्नुहोस् । मिटमसला ३० देखि ४० ग्राम, गरम मसला ४० देखि ४५ र खुर्सानी ४० देखि ४५ ...